नेपाली राष्ट्रिय झन्डाको हिन्दुत्व -
नेपाली राष्ट्रिय झन्डाको हिन्दुत्व
भोगीराज चाम्लिङ अध्येता
२२ भाद्र २०७७, सोमबार १४:११ । ललितपुर
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका बारेमा लेखेको छ- ‘नेपालको राष्ट्रिय झन्डा विलक्षण छ । त्यसको कारण हो यसको परम्परागत हिन्दु रूपरंग ।’ राष्ट्रसंघले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको ‘हिन्दुत्व’का बारेमा गरेको यस व्याख्यालाई सजिलै पन्छाउन सकिन्न, न त यसलाई नेपाल एकात्मक हिन्दु अधिराज्य हुँदाको बखतको अधिनायकवादी व्याख्या भनेर नै बेवास्ता गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न नसकिने केही ठोस ऐतिहासिक आधार छन् ।
यस राष्ट्रिय झन्डामा हिन्दुहरूको विशाल योगदान छ । यसमा प्रयोग भएका रंग, रेखा र अर्थहरूमा हिन्दुहरूको अमिट छाप र सभ्यताको प्रतिविम्ब छ । तर, यसमा जनताभन्दा शासकहरूको स्वार्थकै पदचिह्न बढी परेका छन् । शासकले यसको व्याख्या त्यसरी नै गर्दै आएका छन् । यसका बारेमा गरिएका केही उल्लेखनीय व्याख्या यस्ता छज्- सिम्रिक राजतन्त्रबोधक रंग हो, चन्द्रमा चन्द्रवंशी शाह राजतन्त्र र सूर्य सूर्यवंशी लिच्छवि-मल्ल शासकहरूको प्रतीक हो, सूर्यवंशी भएकाले लिच्छवि-मल्लकालमा सूर्य माथि र चन्द्रमा तल थियो, तर चन्द्रवंशी पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि यता चन्द्रमा माथि र सूर्य तल पारियो, यसमा प्रयोग भएको एउटा त्रिकोणले हिन्दु मान्यताअन्तर्गतको त्रिशक्ति र अर्को त्रिकोणले त्रिगुणको प्रतिनिधित्व गर्छ आदि इत्यादि ।
यद्यपि, यस व्याख्यालाई कत्ति पनि फेरबदल गर्न सकिँदैन अथवा फेरबदल गर्न नै हुँदैन भनेर संकुचित तर्क गर्नु जरुरी छैन किनभने रंग, रेखा र आकारका स्वतः आफ्नै निजी अर्थ हुँदैनन् । यसलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ । शासकले आफ्नो अनुकूलतामा यसको व्याख्या गरे, हामीले हाम्रो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने हो । विद्यमान राष्ट्रिय झन्डामा अंकित सूर्य, चन्द्रमा, सिम्रिक, त्रिकोण सबैको पुनव्र्याख्या गर्न सकिन्छ । तर, सिक्काको अर्को पाटो हुन्छ भनेझैँ यो राष्ट्रिय झन्डाको पनि अर्को पाटो छ ।
सिक्काको अर्काे पाटो
यो त्रिकोणीय पताका सुरुमा आर्य कविलाहरूको गणचिह्न थियो । पछि बिस्तारै मठ-मन्दिरहरूको ध्वजामा परिणत भयो । मन्दिरको ध्वजा राज्यलाई हिन्दूकरण गर्ने क्रमसँगसँगै हिन्दु शासकहरूको राजचिह्न बन्यो । र, हिन्दु राजतन्त्रको एकछत्र शासन स्थापना भएपछि त्यही राजचिह्न राष्ट्रिय झन्डा बन्यो । त्यसकारण ‘हिन्दुत्व’ यो राष्ट्रिय झन्डाको मानक पहिचान हो । वास्तवमा ‘हिन्दुत्व’ वर्तमान राष्ट्रिय झन्डाका हकमा गीतको स्थायी अन्तराजस्तै हो । समस्या ठीक यहीँनिर छ- हिन्दुत्वसँग जोडिएको ।
यसको इतिहासको पुनव्र्याख्या हुन सक्दैन । यस ऐतिहासिकतालाई टुटाएर राष्ट्रिय झन्डाको व्याख्या गर्नु न त वैज्ञानिक हुन्छ, न त त्यसो गर्दैमा त्यो स्वीकार्य हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै छ । यस झन्डालाई उसको आफ्नै सांस्कृतिक सीमाभित्र रहन दिइन्छ भने यसको ‘हिन्दुत्व’ कसैको टिप्पणीको विषय बन्दैन । तर, जब यसलाई राष्ट्रिय झन्डा बनाइन्छ तब त्यो हिन्दूकरणकै निरन्तरता हुन्छ, र त्यो टिप्पणीको विषय बन्छ । अहिलेकै राष्ट्रिय झन्डालाई निरन्तरता दिनु भनेको ‘हिन्दुत्व’लाई सांस्कृतिक ध्वजा बनाएर ओलम्पिक दौडमा निस्कनुजस्तै हो । यो धर्मनिरपेक्षताको मर्मविपरीत हुन जान्छ । अब कुनै पनि रूपमा हिन्दूकरणको पुनर्मुद्रण आवश्यक छैन ।
झन्डा सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । सार्वभौमसत्तामाथि जोड तर राष्ट्रिय एकतालाई गौण बनाएर राष्ट्रिय झन्डाबारे बहस गर्नु एकांकी हुन्छ । यी एकसाथ उठाइनुपर्ने कुरा हुन् । राष्ट्रिय एकताविना सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन सक्दैन । न त राष्ट्रिय एकताको अमूर्त तर्कले सार्वभौमसत्ता बलियो हुन्छ । साँचो राष्ट्रिय एकता शताब्दीऔँदेखि उत्पीडनमा परेकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि, उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरेपछि मात्र सम्भव छ
राष्ट्रिय एकताकै कुरा गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने राजतन्त्रले हिन्दु अधिनायकत्व थोपरेर नेपाली समाजलाई चिराचिरा पारेको हो । त्यसैलाई जोड्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएको हो । यस्तो स्थितिमा फेरि ‘हिन्दुत्व’सहितको झन्डालाई नै अघि सार्ने हो भने त्यसले निश्चय नै राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्याउँदैन , बरु सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विभाजनतर्फ अग्रसर गराउँछ । भावनात्मक राष्ट्रिय एकताका वैचारिक जुइनाहरू खुस्काएर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सकिँदैन । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय झन्डालाई धार्मिकताबाट टाढा नराख्दा त्यो कुनै दिन कुनै धर्म-सम्प्रदायको सांस्कृतिक हैकम थोपर्ने औजार बन्छ, जसरी यो राष्ट्रिय झन्डालाई बनाइयो ।
हो, यस झन्डाको बनोट विश्वभरिमै ‘विलक्षण’ छ । राष्ट्रसंघले पनि यो कुरा स्वीकार गरेको छ । तर, विलक्षणता मात्र राष्ट्रिय झन्डाको योग्यता होइन । मुख्य कुरा त्यसले बोकेको सारभूत अर्थ युगसापेक्ष छ कि छैन, त्यसले हिँडेको इतिहासको पाइला पछ्याउनलायक छ कि छैन भन्ने हो । विलक्षण भएकै आधारमा मात्र अहिलेको राष्ट्रिय झन्डा यथावत् हुनुपर्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन । विलक्षणतालाई मात्र समातेर तर्क गर्ने हो भने त वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने राजतन्त्र झन् कति विलक्षण थियो । हामीले त्यसलाई किन निरन्तरता दिएनौँ ? त्यसलाई किन ढालेर गणतन्त्र ल्यायौँ ? त्यही ढलेको राजतन्त्र र हिन्दु अधिनायकवादद्वारा यस झन्डालाई राजनीतिक-सांस्कृतिक वैधता प्रदान गरिएको थियो । ती दुवै बाँकी नरहेपछि यो राष्ट्रिय झन्डाको वैधता पनि समाप्त भएको छ । अर्को कुरा, यसलाई जनआन्दोलनले आफ्नो ध्वजा पनि बनाएन । त्यसकारण फेर्नैपर्ने चिजको ‘हिट लिस्ट’मै पर्छ राष्ट्रिय झन्डा, ‘लो प्रोफाइल’मा होइन । यो राष्ट्रिय झन्डा नफेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ- के यो राष्ट्रिय झन्डा ‘शाश्वत सत्य’ जस्तै हो ? कुनै पनि क्रान्ति, परिवर्तन र राजनीतिक प्रणालीले यही झन्डा फहराइरहनुपर्छ ? त्यसै हो भने हाम्रो झन्डाप्रेम उदेकलाग्दो छ ।
(हालै नेपालको झण्डा जलाइएपछि यसबारे बहस चलिरहेको बेला नयाँ पत्रिकामा पहिल्यै ‘राष्ट्रिय झन्डाको हिन्दुत्व’ शिर्षमा छापिएको अध्येता चाम्लिङको यो लेख सान्दर्भिक लागेकोले हामीले शिर्षक परिवर्तन गरी यहाँ छापेका छौं । – सम्पादक)